Uguyaraan 5.25 wuxuu la yimaadaa isdhexgalka Jitsi, hagaajinta Welcomebot iyo inbadan | Laga soo bilaabo Linux
Ugu yaraan 5.25 waxay la timid isdhexgal loogu talagalay Jitsi, hagaajinta Welcomebot iyo waxyaabo kale
Ka dib dhowr toddobaad oo horumar ah, daahfurka nooca cusub ee nidaamka fariinta Uguyaraan 5.25 oo loo qoondeeyay sida LTS nooca (nooca taageerada la dheereeyey) iyo kaas oo bixiya waxyaabo badan oo cilad ah oo loogu talagalay xasilloonida weyn kaas oo sidoo kale diiradda saaray hubinta xiriirka u dhexeeya horumariyeyaasha iyo shaqaalaha shirkadda.
Kuwa aan aqoon u lahayn Mattermost, waa inaad taas ogaataa tan waxaa loo taagay bedel u furan nidaamka isgaarsiinta ee Slack waxayna kuu ogolaaneysaa inaad hesho oo aad dirto farriimo, feylal iyo sawirro, raadraac taariikhda wada hadalkaaga oo aad ku hesho ogeysiisyo ku saabsan casrigaaga ama kombuyuutarkaaga.
Waxaa intaa u dheer waxay taageertaa iskudhafka sanduuqa, iyo uruurin badan oo ka mid ah modules-ka hooyo ayaa la bixiyay si loogu dhex daro Jira, GitHub, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, BitBucket, Twitter, Redmine, SVN, iyo RSS / Atom.
1 Maxaa cusub ee ugu yaraan 5.25?
1.1 Sidee loo dhejiyaa barnaamijka 'Linux'?
Maxaa cusub ee ugu yaraan 5.25?
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee lagu soo bandhigay qaabkan cusub waa is dhexgalka leh madal furan Jitsi loogu talagalay shirarka fiidiyowga iyo bixinta marin u helka waxyaabaha ku jira shaashadda.
Is-dhexgalkan swaxayna ku dhammaatay mahadsanid dhammaystir kaas oo loo qaabeeyey in lagu isticmaalo adeegga Jitsi ee dadweynaha (meet.jit.si).
Kuwa xiiseynaya isku-darka fiilada, Tan waxaa lagu dhejin karaa suuqa sheybaarka ka dibna awood u siiya qalabka. Ikhtiyaar ahaan, Mattermost wuxuu ku xirnaan karaa server-ka Jitsi ee iskiis u martigeliya loona qaabeeyey inuu adeegsado xaqiijinta JWT (JSON Web Token).
Si loo bilaabo shir fiidiyoow cusub ah, amarka "jitsi" iyo badhan gaar ah ayaa lagu hirgeliyaa isdhexgalka. Wadahadalka fiidiyowga waxaa lagu dari karaa sheekaysiga 'Mattermost chats' sida daaqad sabaynaysa.
Sida caadiga ah, serverka loo yaqaan 'meet.jit.si' waxaa loo adeegsadaa shirarka, laakiin waxaad ku xirmi kartaa server-kaaga Jitsi oo aad u habeyn kartaa isticmaalka JWT (JSON Web Token).
Horumarka labaad ee xusida mudan ayaa ah cusbooneysiinta qalabka plugin ee Welcomebot Si loo oggolaado Fariimaha gaarka ah waxaa loo soo bandhigayaa dadka isticmaala ee ku xira sheekaysiga 'Mattermost chats'.
Sidoo kale qaabkan cusub wuxuu soo bandhigayaa awooda aad ku arki karto fariimaha soo dhaweynta iyo taageerada isku xirka fariimaha gaarka ah ee kanaalada.
Sidee loo dhejiyaa barnaamijka 'Linux'?
Kuwa doonaya inay awoodaan inay ku rakibaan Mattermost nidaamkooda, waa inuu aadaa bogga rasmiga ah ee arjiga qaybteeda soo dejintana waxaad ka heli kartaa qaybaha qaybinta qayb kasta oo Linux ah oo taageerta (serverka)
Iyadoo macmiilka waxaa loogu deeqayaa xiriiriyeyaasha nidaamyada kala duwan desktop iyo nidaamyada hawlgalka mobilada. Xiriiriyaha waa kan.
Ku saabsan xirmada serverka, Waxaa nala siiyaa baakado loogu talagalay Ubuntu, Debian ama RHEL, iyo sidoo kale ikhtiyaar fulin ah oo lala yeesho Docker, laakiin si loo helo xirmada waa inaan bixino emaylkeena.
Waxaad raaci kartaa tilmaamaha soo socda ee rakibidda, waxay ku kala duwan tahay kaliya rakibida xirmada, laakiin dhanka qaabeynta waxay la mid tahay wixii disto ah. Xiriiriyaha waa kan.
Dhinaca macmiilka, Linux-ka waxaa hadda naloo fidiyaa xirmo tar.gz ah (oo loogu talagalay guud ahaan isticmaalka Linux). In kasta oo horumariyayaashu sidoo kale bixiyaan xirmooyin horay loo habeeyay oo loogu talagalay Ubuntu iyo Debian, laakiin waqtigan baakidhadaas weli lama samaysan.
Xaaladaha xirmada tar.gz, kala bixi baakadka oo ku kaydi faylka "mattermost-desktop" galka.
Finalmente loogu talagalay Arch Linux xirmo horey ayaa loo soo ururiyey loogu talagalay qaybinta ama noocyada kala duwan ee ka mid ah, meelaha bakhaarada AUR.
Si ay u helaan, waxay kaliya u baahan yihiin inay haystaan ​​keydka AUR oo awood u leh faylkooda pacman.conf oo ay ku rakibtay yay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Ugu yaraan 5.25 waxay la timid isdhexgal loogu talagalay Jitsi, hagaajinta Welcomebot iyo waxyaabo kale
Nooca cusub ee ClamAV 0.102.4 wuxuu xalliyaa 3 u nuglaanta
Nooca cusub ee Zulip 3.0 horay ayaa loo soo saaray waana kuwan wararkiisa